Sweden oo Soomaaliya u soo dirtay wakiil horay uga soo shaqeeyay Muqdisho iyo gobolka geeska Afrika. | Dayniile.com
Home Warkii Sweden oo Soomaaliya u soo dirtay wakiil horay uga soo shaqeeyay Muqdisho...
Sweden oo Soomaaliya u soo dirtay wakiil horay uga soo shaqeeyay Muqdisho iyo gobolka geeska Afrika.
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Balal Maxamed Cusmaan, ayaa nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjirannimo kaga guddoomay Mudane Per Lindgärde, Safiirka Boqortooyada Sweden ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Intii uu kulanka socday, Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga waxa uu soo dhoweeyay Safiirka cusub ee Sweden isaga oo u balanqaaday wada shaqay wanaagsan oo dhex marta labada dhinac.
Balal ayaa u rajeeyay inuu ku guuleysto howsha loo xilsaarray si uu hore ugu dhaqaajiyo xiriirka labo geesoodka ee labada dal si ay u yeeshaan iskaashi dhow oo dhinacyo kala duwan leh.
Dhankiisa, Danjiraha Boqortooyada Sweden ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsanyahay inuu dalkiisa ku matalo Soomaaliya.
Diblumaasiga ayaa bogaadiyay xiriirka iyo iskaashiga labada dal, isagoo ku nuuxnuuxsaday inuu ku dadaali doono sidii loo horumarin lahaa xiriirkaas si loo gaaro himilooyinka guud ee labada dal iyo labada dad ee saaxiibka ah.
Dowladda Sweden ayaa 15 Abriil 2021, waxa ay Per Lindgärde u soo magacawday safiirka Soomaaliya ee Muqdisho.
Lindgärde ayaa xilliga la magacaabaayay waxa uu ahaa safiirka Sweden u fadhiya Uganda waxaana uu hore u ahaa safiirka Nigeria.
Previous articleWasiirkii Hore ee Amniga Galmudug” Wadaadada Waahibiyada & QoorQoor Waa dagaal oogayaal”
Next articleReport: Police looking at Qatar link in killing of Sir David Amess
Wasiirka Warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si adag uga jawaabay eedeyn xooggan oo ka soo yeertay mid ka mid ah musharraxiinta mucaaradka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur...
A Texas rabbi claims he and two other captives survived a...
Diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo gacan ka geysatay badbaadinta...
Koonfur Galbeed oo Maanta xareyneysa Ergada dooraneysa 11 Kursi
Dowladda Somalia oo qalab Casri ah u dirtay Garoonka Diyaaradaha magaalada...